Red Hat yatove kushanda pane itsva NVFS faira system, inoshanda kune NVM | Linux Vakapindwa muropa
Red Hat yatove kushanda pane nyowani yeNVFS faira system, inoshanda yeNVM
Mikulas Patocka, mumwe wevagadziri veLVM uye muvambi weakawanda ekuchengetedza ekugadzirisa zvigadzirwa paRed Hat, yakaunza iyo nyowani yeNVFS faira system kune iyo Linux kernel tsamba yekutumira.
Iyi nyowani system inotarisira kugadzira inokurumidza uye compact faira system yezvinhu zvisina kugadzikana ndangariro machipisi (NVM, semuenzaniso NVDIMM), iyo inosanganisa mashandiro e RAM nekwanisi yekuchengetedza zvachose zvirimo.
Paunenge uchigadzira NVFS ruzivo rweFS NOVA rwakafungidzirwa, muna 2017 yakagadzirwa chaizvo yeNMM memory, asi isina kuiswa muLinux kernel uye nerutsigiro rwakaganhurirwa rweLinux kernels kubva 4.13 kusvika 5.1.
Iyo yakarongwa FS NVFS zviri nyore kupfuura NOVA (4972 mitsara yekodhi vs 21459), inopa fsck zvinoshandiswa, ine kuita kuri nani, inotsigira akawedzera hunhu (xattrs), ekuchengetedza mavara, ACLs, uye makota, asi haitsigire zviripo.
NVFS yekuvakisa iri padhuze neFS Ext4 uye inokodzera mushe modhi yemafaira masisitimu akavakirwa pasisitimu yeVFS, zvichiita kuti zvikwanise kudzikamisa huwandu hwepakati nepakati uye nekupfuura nemo module isingade kernel patches.
NVFS inoshandisa iyo DAX kernel interface kuti iwane zvakananga zvishandiso kuenderera kuchengetedza, kupfuura peji re cache. Kugadzirisa basa neNVM memory, iyo inoshandisa kutarisa kwekutora, zviri mukati mechairi zvakaiswa kune yakatarwa kero nzvimbo yeiyo kernel pasina kushandisa echinyakare block mudziyo wedenga uye yepakati cache. Iyo inoshandiswa kuchengetera zvirimo mumadhairekitori emuti wemidzi (mudzi wemuti), mune iro rimwe nerimwe proheshirovano zita refaira uye kukosha kwehash inoshandiswa kutsvaga muti.
Kuvimbika kwedata kunovimbiswa kuburikidza ne "kugadzirisa" mashandiro (senge muFreeBSD UFS uye OpenBSD FFS) usingashandise bhuku.
Kuchengetedza huori hwefaira muNVFS, lIwo ekuchinjana kwedata mashandiro akaiswa mumapoka zvekuti kuparara hakugone kutungamira mukurasikirwa nemablock kana ma inode, uye kuvimbika kwezvivakwa kunodzoserwa neiyo fsck utility.
Iyo fsck yekushandisa yakawanda kuverenga uye inopa brute simba kuita kwe 1,6 mamirioni inode pasekondi.
Mune mabhenji, NVFS yakaita kopi yemuti inoshanda neLinux kernel sosi muNVM ndangariro ingangoita 10% nekukurumidza kupfuura NOVA, 30% nekukurumidza kupfuura ext4, uye 37% nekukurumidza kupfuura XFS.
Mune bvunzo yekutsvaga data, NVFS yaikurumidza kupfuura NOVA ne3% uye ext4 uye XFS ne15% (asi iine diski cache, NOVA yakawanikwa iri 15% inononoka).
MuMillion Directory Operations test, NVFS yakapfuura NOVA ne40%, ext4 ne22%, uye XFS ne46%. Kana uchifananidza chiitiko cheDBMS, iyo NVFS faira sisitimu yakapfuura NOVA ne20%, ext4 ne18 nguva, uye XFS ka5. Muyedzo ye fs_mark, NVFS neNOVA zvainge zvakangofanana, nepo ext4 neXFS zvaive zvakapetwa katatu kumashure.
Iyo lag yetsika FSs muNVM ndangariro inokonzereswa nekuti iwo haana kugadzirirwa byte kero inoshandiswa mune isina-kugadzikana ndangariro, iyo yakafanana neyakajairika RAM.
Kuverenga zvakajairika madhiraivha inopa atomicity yekushanda padanho rekuverenga / kunyora chikamu, nepo NVM ndangariro inopa mukana padanho remunhu mumwe muchina mazwi.
Zvakare, echinyakare mafaera masystem anoedza kudzikisa kusimba kwekuwana midhiya, izvo zviri pachena kutaridzika kunonoka kupfuura RAM, uye zvakare kuyedza kubatanidza mashandiro kuti uone kuverenga kwakateerana kana uchishandisa madhiraivhi akaomarara, maitiro ekukumbira mitsetse, kupatsanurwa kwekuparadzaniswa uye zvakakamurwa zvakasiyana kuita akasiyana mashandiro. .
Zvekuyeuka kweNVM, matambudziko akadaro haana basa, nekuti kumhanyisa kwedatha kunofananidzwa ne RAM.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Red Hat yatove kushanda pane nyowani yeNVFS faira system, inoshanda yeNVM
WINE 5.18 inosvika nerutsigiro rwema modes ekuratidzira ane akasiyana mafambiro
Purism Librem 14 iri kutengeswa muna Zvita